I-beta yokuqala kawonkewonke ye-macOS ePhakamileyo yeSierra 10.13.1 kunye ne-tvOS 11.1 ngoku iyafumaneka | Ndisuka mac
Abafana baseCupertino baqale umjikelo wokuqala we-betas izolo emva kokukhupha iinguqulelo zokugqibela zeenkqubo zokusebenza abebesebenza kuzo kwiinyanga ezidlulileyo. Kuqala, kwaye njengesiqhelo, ibeta yokuqala ye-macOS ePhakamileyo yeSierra yayijolise kubaphuhlisi. Iiyure ezingama-24 kamva, abafana baseCupertino basungule i-beta efanayo ngaphakathi kwinkqubo kawonkewonke ye-beta, ngokukodwa uguqulelo lwe-10.13.1, ukuze bonke abo basebenzisayo abayinxalenye yale nkqubo Ngoku ungaqala ukonwabela ukuphuculwa okusizisela le nguqulo intsha.
Kodwa yayingeyiyo kuphela i-beta kawonke-wonke eyaziswe yi-Apple izolo, kuba ikwenze ukuba ifumaneke kubasebenzisi be-tvOS yoluntu beta, i-beta yohlaziyo lokuqala oluza kufika kwiinyanga ezizayo ze-tvOS, inombolo engu-11.1. Njengesiqhelo, I-Apple ayikhange ichaze inkqubela phambili eza kuvela ezandleni zale nguqulelonjengoko usebenzise umtya oqhelekileyo wokuphucula ukusebenza kunye neebugs ezincinci.
Kubonakala ngathi ingxelo yokugqibela ye-MacOS ePhakamileyo yeSierra ifike kwisiqingatha esincinci, ukusukela oko ayiniki nkxaso kwiidiski zeFusion Drive, Uveliso lwe-Apple olungakhange luphumelele kwimarike. Ezi drive zinzima okwangoku azihambelani nefomathi entsha ye-APFS, nangona yayikwi-beta yokuqala eyasungulwa kwimarike.
Enye ingxaki siyifumana kwiidrive ze-OWC SSD, iidiski ezingahambelaniyo ngoku neMacOS ePhakamileyo yeSierra, ke azikuvumeli ukufakela uhlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza ye-Mac.Ngokunjalo ngengxaki kwiidiski zeFusion Drive, uApple uthi uyasebenza ekusombululeni ezi ngxaki ukuze Abasebenzisi abachaphazelekayo banokuyonwabela inkqubo yefayile entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-beta yokuqala kawonkewonke ye-macOS ePhakamileyo yeSierra 10.13.1 kunye ne-tvOS 11.1 ngoku iyafumaneka
Inika ulwazi ngeMac, ikhalenda edibanisa imisebenzi, iminyhadala, iiprojekthi kunye nokunye